Waxsansheeg News - Waa maxay sababta naxaasta loo adeegsado farshaxannada
Qalabka naxaastiisu waxay leedahay waqti dheer oo lagu hayn karo laguna sii hayn karo si ka wanaagsan boqollaal sano. Marka loo barbardhigo farshaxanno kale, farshaxan naxaas ah ayaa sidoo kale leh taariikh dheer, maahan? Waxaan ogsoonahay farshaxanka naxaasta ah ee naxaasta lagu ridi karo qaab ahaan, xayawaan iwm., Iyadoo la eegayo daqiiqada iyo shuruudaha faahfaahinta gaarka ah. Marka farshaxanka farshaxanka ayaa dooran doona farshaxankan naxaasta ah si uu u abuuro farshaxanimada naxaas ee casriga ah.
Qalabka farshaxanka casriga ah waxaa laga samayn karaa naxaas, fiberglass, steel steel, corten steel iwm. Waxaan kuxiran karnaa shuruudahaaga qaaska ah si aan u habaynno qaab farshaxan, laakiin waxaan sidoo kale u baahan nahay inaan saldhigno naqshadeynta ama meelaha codsashada si aan ugula tallinno agab ku habboon macaamiisheenna.
Waxaan heysanaa khibrad khibrad dheer oo farshaxanimo ah in kabadan 13 sano, hadaba maxaad nala soo xiriiri weydey hadaad rabto inaad tan heysato, mahadsanid! Farshaxan qurxinta biraha kartoo waa mid aad u qurux badan oo midab kasta oo la heli karo noo marka aad noo sheegto shuruudahaaga. Maxaysan ula xiriirin isla markaaba, mahadsanid!
Shirkadda Soo Bandhig
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD.waxay ku taal Xiamen City, Gobolka Fujian, China.Waxaan ka sameysanay nooc kasta oo farshaxanno biraha farshaxanno ah iyo taallooyin ah in ka badan 10 sano. Waxyaabahayaga ayaa waxaa ka mid ah farshaxanka bannaanka weyn ee weyn, farshaxanka beerta, farshaxanka baarkinka, farshaxanka magaalada iwm.
Waxaan u dooranaa maaddo u fiican bay'ada sida sheyga ugu muhiimsan, sida birta aan birta lahayn, naxaasida ah, maaddada fiberglass-ka ah.Waxay u fiican yihiin qurxinta bannaanka iyo gudaha. Sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhulkeenna samaynta farshaxanka.
Waxaan aaminsanahay inaan u soo bandhigi karno qiimaha ugu fiican iyo tayada sare ee badeecada macaamiisheenna, oo annaga na doorano waxaad heli doontaa midka ugu fiican. Fadlan nala soo xiriir sida hoos ku xusan, mahadsanid!
Iibiyaha: Ms. Cathy
Telefoon: + 0086-13950110440,+86 592 5970572
Appka Waxyaabaha: 0086-13950110440
Facebook: 0086-13950110440 (ama farshaxan cathy)
Ku Xidhan: Sawirka Cathy